श्रीमानलाइ नराम्रो शब्द बोल्ने, हेपेर बोल्ने महिलाले कहिल्लै श्रीमानलाइ प्रगती गर्न दिदैनन ! - Deshko News Deshko News श्रीमानलाइ नराम्रो शब्द बोल्ने, हेपेर बोल्ने महिलाले कहिल्लै श्रीमानलाइ प्रगती गर्न दिदैनन ! - Deshko News
काठमाडौं श्रीमान्लाई नराम्रो सब्द बोल्ने हेपेर बोल्ने महिलाले कहिल्लै श्रीमानलाइ प्रगती गर्न दिदैनन ! चाहे जसले जे भनोस श्रीमान भनेका देवता हुन् ! श्रीमानहरु परिवारको लागि मर्न तयार हुन्छन ! आफ्नो श्रीमान लाइ जतिबेला पनि नराम्रो सब्द बोल्ने हेपेर बोल्ने चिच्याएर बोल्ने महिलाले कहिल्लै पनि आफ्नो पुरुषको भलो हुन दिदैनन,
व्याइफ्रेण्डसँगको सम्बन्धमा धोका भएपछि एक युवतीले यस्तो कदम उडाइन्, जसलाई देखेर मानिसको होश उड्यो। २४ वर्षीया क्रिस्टिना कुछमा व्याइफ्रेण्ड ज्याटिलसँग छुट्टी मनाउन बहामास गएकी थिइन्। छुट्टी मनाउने क्रममा क्रिस्टिनाले आफ्ना व्याइफ्रेण्डसँग ब्रेकअप गरिन्।
क्रिस्टिना एक रसियन मोडल हुन् र उनलाई आफ्नो कारोबार सुरु गर्नु थियो। व्याइफ्रेण्ड ज्याटिनले क्रिस्टिनाको कारोबार सुरु गर्न पैसा दिने बताएका थिए। बहामासमा डिनर गर्ने समयमा जब क्रिस्टिनाले ३२ लाख मागिन् तब ज्याटिनले सो रकम दिन अस्विकार गरे। त्यति नै बेला क्रिस्टिनाले ज्याटिनसँग ब्रेकअप गरिन्।
ज्याटिनले क्रिस्टिनसँगको सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि क्रिस्टिनाले ज्याटलिनसँग बदला लिन करिव ३५ लाख पर्ने मर्सिडिज बहामासको स्वीमिङ पुलमा धकेलिदिइन्। ज्याटिनले आफू क्रिस्टिनालाई धेरै माया गर्ने र विवाह गर्ने बताएका थिए। तर क्रिस्टिनाको हरकतले ज्याटिन निरास भए।